अनसुने, निन्दनीय अनुग्रह - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
लेख > प्रवचन > नराम्रो, अपमानजनक अनुग्रह
यदि हामी पुरानो नियममा फर्क्यौं भने, शमूएलको पहिलो पुस्तकमा, तपाईंले पत्ता लगाउनुहुनेछ, पुस्तकको अन्त्यतिर, इजरायलका मानिसहरू (इजरायलीहरू) फेरि तिनीहरूको मुख्य शत्रु, पलिश्तीहरूसँग लडाइँमा छन्।
यो विशेष स्थिति मा, उनीहरुलाई कुटपिट गरिन्छ। वास्तवमा, तिनीहरू ओक्लाहोमा फुटबल स्टेडियम, ओरेन्ज बाउल भन्दा कडा हिट छन्। त्यो खराब छ; किनकि यो विशेष दिनमा, यो विशेष युद्धमा, तिनीहरूका राजा, शाऊल, मर्नुपर्छ। यस लडाइमा उनको छोरा, जोनाथन, उनीसँगै मरे। हाम्रो कथा केही अध्याय पछि सुरु हुन्छ, २ शमूएल ४:४ (GN-2):
“हो, शाऊलका एक जना नाति शाऊल थिए जो जोनाथनको एक छोरा थिए जसलाई मेरिब-बाल [मेफिबोस्केट पनि भनिन्छ], तर उनी दुवै खुट्टामा पक्षाघात भएको थियो। उहाँ पाँच वर्षको हुनुहुन्थ्यो जब उनका बुबा र हजुरबुबाको मृत्यु भयो। जब इजेरेलको खबर आयो, उसकी नर्सले उनलाई आफूसँग भाग्नको निम्ति लगेकी थिइन। तर हतारमा उसले उनलाई छोडिदिए। त्यसबेलादेखि ऊ पक्षाघात भएको छ। ” यो मेफिबोशेटको नाटक हो। किनकि यो नाम उच्चारण गर्न गाह्रो छ, हामी यसलाई आज बिहान एक उपनाम दिन्छौं, हामी यसलाई छोटोका लागि "Schet" कल गर्दछौं। तर यस कथामा, पहिलो परिवार पूर्ण रूपमा हत्या भएको देखिन्छ। जब खबर राजधानीमा पुग्छ र दरबारमा पुग्छ, आतंक र गोलमाल हुन्छ - किनकि तपाईंलाई थाहा छ अक्सर राजाको हत्या गर्दा परिवारका सदस्यहरू पनि भविष्यको विद्रोह नभएको सुनिश्चित गर्न मारिन्छन्। त्यसैले यो भयो कि सामान्य अराजकताको क्षणमा बच्चा बहिनीले शेटलाई लिएर महलबाट भागिन्। तर त्यस ठाउँमा हतार र हडबडले गर्दा त्यसले खसाल्यो। बाइबलले हामीलाई भन्छ, ऊ आफ्नो बाँकी जीवन पक्षाघात भएको थियो। एकछिन सोच्नुहोस् कि उहाँ शाही सेक्सका हुनुहुन्थ्यो, र एकदिन अघि, कुनै पाँच बर्षे बच्चाको जस्तै उनी कुनै चिन्ताले सरुवा भएनन्। ऊ चिन्ता बिना राजदरबारको वरिपरि हिंडे। तर त्यो दिन उसको सम्पूर्ण भाग्य परिवर्तन हुन्छ। उसको बुबा मारियो। उसको हजुरबुबा मारिए। ऊ बाँकी दिनहरुमा झर्छ र पक्षाघात भएको छ। यदि तपाईं बाइबल पढ्न जारी राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले आगामी २० बर्षमा Schet मा रिपोर्ट गरिने धेरै भेट्टाउनुहुने छैन। हामी वास्तवमै उसको बारेमा सबै कुरा जान्दछौं कि उहाँ एक दु: खी, एक्लो ठाउँमा बस्नुहुन्छ आफ्नो पीडासँग।
म कल्पना गर्न सक्छु कि तपाईंहरु मध्येले आफैंले पहिले नै यस्तो प्रश्न सोध्न शुरू गरिरहनु भएको छ जुन मैले कहिले सन्देशहरू सुन्दा आफैलाई सोध्छु: "ठीक छ, त्यसोभए के?" त्यसो भए मसँग के गर्नु पर्छ? आज म "त्यसो भए के?" को उत्तर दिन चाहन्छु। यहाँ पहिलो उत्तर छ।
हामी सोचे भन्दा टुटेका छौं
तपाईंको खुट्टा पक्षाघात भएको छैन, तर तपाईंको दिमाग हुन सक्छ। तपाईंको खुट्टा भाँच्न सकिन्न, तर बाइबलले भने अनुसार तपाईंको प्राण। र यो कोठामा सबैको स्थिति हो। यो हाम्रो साझा अवस्था हो। जब पावल हाम्रो उजाड अवस्थाको बारेमा कुरा गर्छन्, तब उनी एक पाइला अगाडि जान्छन्।
एफिसी २: १ हेर्नुहोस्:
“तपाईंले पनि यस जीवनमा भाग लिनुभयो। तपाईं विगतमा मर्नुभयो; किनभने तपाईंले भगवान्‌को अवज्ञा गर्नुभयो र पाप गर्नुभयो ”। ऊ भाँच्ने भन्दा बाहिरको छ पक्षाघात भएको मात्र। उसले भन्छ कि तपाईंको ख्रीष्टबाट अलग हुने अवस्थालाई 'आत्मिकरुपमा मृत' भनेर वर्णन गर्न सकिन्छ।
तब उनी रोमी verse पद verse मा भन्छन्:
»यो प्रेम यस तथ्यमा देखिन्छ कि ख्रिष्टले हाम्रो लागि आफ्नो जीवन दिनुभयो। ठीक समयमा जब हामी पापको शक्तिमा थियौं, उहाँ हाम्रा लागि असहायहरूका लागि मर्नुभयो। ”
बुझ्नुभयो ? हामी असहाय छौं र, यो मनपर्छ वा होइन, तपाईं यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ वा नगर्नुहोस्, यसलाई विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, बाइबलले भन्छ कि तपाईंको अवस्था (जबसम्म तपाईं ख्रीष्टसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्न) आत्मिक रूपमा मरेको अवस्था हो। र यहाँ नराम्रो समाचार को बाकी छ: त्यहाँ केहि छैन तपाइँ समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यसले कडा प्रयास गर्न वा राम्रो हुन मद्दत गर्दैन। हामीले सोचेभन्दा धेरै टुटेका छौं।
यो कार्य यरूशलेमको सिंहासनमा नयाँ राजाको साथ सुरु हुन्छ। उनको नाम डेभिड हो। तपाईंले सायद उहाँको बारेमा सुन्नु भएको छ। ऊ भेडा चराउने गोठालो केटा थियो। अहिले उहाँ देशको राजा हुनुहुन्छ । उहाँ शेटको बुबाको सबैभन्दा मिल्ने साथी, असल साथी हुनुहुन्थ्यो। Schet को बुबा को नाम जोनाथन थियो। तर डेभिडले सिंहासन मात्र लिएर राजा भएनन्, उनले जनताको मन पनि जितेका थिए। वास्तवमा, उनले राज्यलाई 15.500 वर्ग किलोमिटरबाट 155.000 वर्ग किलोमिटरमा विस्तार गरे। तिमी शान्तिको समयमा बस्छौ। अर्थतन्त्र राम्रो भइरहेको छ र कर राजस्व उच्च छ। लोकतन्त्र भएको भए दोस्रो कार्यकालको जित निश्चित थियो । जीवन मात्र राम्रो हुन सक्दैन। म महलमा अरू कसैको तुलनामा डेभिड आज बिहान चाँडो उठेको कल्पना गर्छु। ऊ फुर्सदमा बाहिर आँगनमा हिंड्छ, उसले दिनको दबाबले उसको दिमागमा लिनु अघि आफ्ना विचारहरूलाई बिहानको चिसो हावामा घुम्न दिन्छ। उसको विचार फिर्ता सर्छ, उसले आफ्नो विगतका टेपहरू सम्झन थाल्छ। यस दिन, तथापि, टेप एक निश्चित घटनामा रोकिदैन, तर एक व्यक्तिमा रोकिन्छ। यो उहाँको पुरानो मित्र जोनाथन हो, जसलाई उसले लामो समयदेखि देखेको छैन। उनी युद्धमा मारिएका थिए। डेभिडले उहाँलाई सम्झन्छ, उहाँको धेरै नजिकको साथी। उनी सँगै समय सम्झन्छन्। तब डेभिडले नीलो आकाशबाट उनीसंग गरेको कुराकानी सम्झन्छन्। त्यस क्षणमा दाऊद परमेश्वरको भलाइ र अनुग्रहले अभिभूत भए। किनभने जोनाथन बिना यो कुनै पनि सम्भव थिएन। डेभिड एक गोठालो केटा थियो र अब ऊ राजा छ र एक दरबारमा बस्छ र उसको दिमाग आफ्नो पुरानो साथी जोनाथनमा फर्कन्छ। उनीहरूले आपसी सम्झौता गर्दा उनीहरूले गरेको कुराकानी सम्झन्छिन्। यसमा उनीहरु एक अर्कालाई वचन दिएका थिए कि उनीहरु प्रत्येक एक अर्काको परिवारको ख्याल राख्नु पर्छ, जे भए पनि उनीहरुको भावी यात्रा कहीं नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यसैबेला डेभिड घुम्छ, आफ्नो दरबारमा फर्कन्छ र भन्छ (प्रस्थ। शमूएल ९:१): के शाऊलको परिवारमा कोही जीवित छ? म सम्बन्धित व्यक्तिलाई एक पक्षमा गर्न चाहन्छु - मेरो मृत मित्र जोनाथनको खातिर? उसले सीबा नाउँ गरेको नोकर भेट्टाउँछ, जसले उसलाई जवाफ दिन्छ (पद। 3b): ​​"जोनाथनको एक छोरा पनि छ। उहाँलाई दुवै खुट्टामा पक्षाघात भएको छ ।” मलाई रोचक लाग्यो कि डेभिडले सोध्दैनन्, "के कोही योग्य छन्?" वा "मेरो सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा काम गर्न सक्ने राजनीतिज्ञ छ?" वा "के त्यहाँ सैन्य अनुभव भएको कोहि छ जसले मलाई सेनाको नेतृत्व गर्न मद्दत गर्न सक्छ?" उसले सजिलै सोध्छ: "के कोही छ?" यो प्रश्न दया को अभिव्यक्ति हो। र जिबा जवाफ दिन्छन्: "त्यहाँ कोही छ जो पक्षाघात भएको छ"। जिबाको जवाफले लगभग सुझाव दिन्छ, "तपाईलाई थाहा छ, डेभिड, म निश्चित छैन कि तपाई वास्तवमै उसलाई वरिपरि चाहनुहुन्छ। उहाँ साँच्चै हामी जस्तो होइन। उहाँ हामीलाई सुहाउँदैन।
मैले यसको बारेमा सोचेँ, र तपाईंलाई थाहा छ, मलाई लाग्छ कि यो आकारको समूहमा हामीमध्ये धेरै मानिसहरू छन् जसले उनीहरूलाई वरिपरि कलंक लगाउँदछन्। हाम्रो विगतमा केहि यस्तो छ जुन हामीसँग बलियाको पादा जस्तै टाँसिरहन्छ। र त्यहाँ कोही व्यक्तिहरू छन् जसले हामीलाई दोष लगाउँदछन्; तिनीहरू कहिल्यै मर्दैनन्। त्यसोभए तपाईले कुराकानी सुन्नुहुन्छ, "के तपाईंले सुसनबाट फेरि केहि सुन्नुभयो? सुसान, तपाईंलाई थाहा छ, यही व्यक्तिले आफ्नो लोग्नेलाई त्यागे।" वा: "मैले अर्को दिन जोसँग कुरा गरें। तपाईलाई थाहा छ म को हुँ, राम्रो, म मादक पदार्थ हो।" र केही व्यक्तिहरूले आफैलाई सोध्छन्: "के कोही यस्तो छ जो मलाई भूत र मेरो विफलताबाट अलग देख्छ?"
जिबा भन्छिन्, "मलाई थाहा छ ऊ कहाँ छ। ऊ लो देबरमा बस्छ।" सबैभन्दा राम्रो तरीकाले Lo Debar वर्णन गर्न को लागी "Barstow" (दक्षिणी क्यालिफोर्निया मा एक टाढाको स्थान) प्राचीन प्यालेस्टाइन मा हुनेछ। [हाँसो]। वास्तवमा, नामको शाब्दिक अर्थ "एक बाँझो ठाउँ" हो। उनी त्यहाँ बस्छन्। डेभिड शेट पत्ता लगाउँछन्। कल्पना गर्नुहोस्: राजा अपंगको पछि दौडिरहेको छ। यहाँ "त्यसो भए के?" को दोस्रो जवाफ छ।
तपाईले सोचे भन्दा बढी गहन रूपमा अनुसरण गरिएको छ
त्यो अद्भुत। म तपाइँलाई एक क्षण को लागी रोक्न र यसको बारेमा सोच्न चाहान्छु। पूर्ण, पवित्र, धर्मी, सर्वशक्तिमान, असीम ज्ञानी भगवान, सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता, मेरो पछि-पछि दौडनुहुन्छ र तपाईंको पछाडि दगुर्नुहुन्छ। हामी साधकहरूको कुरा गर्छौं, आध्यात्मिक वास्तविकताहरू पत्ता लगाउनको लागि आध्यात्मिक यात्रामा मानिसहरू।
तर यदि हामी बाइबलमा जान्छौं, हामी देख्छौं कि वास्तविकतामा परमेश्वर वास्तविक रूपमा खोजीको हुनुहुन्छ [हामीले यसलाई सम्पूर्ण धर्मशास्त्रमा देख्दछौं]। बाइबलको सुरूमा फर्कनुहोस् आदम र हव्वाको कथाले तिनीहरू परमेश्वरबाट लुक्ने दृश्य देखा पर्दछ। भनिन्छ कि परमेश्वर साँझ चिसो आउँनुहुन्छ र आदम र हव्वालाई खोज्नुहुन्छ। उसले सोध्यो: "तिमी कहाँ छौ?" एक मिश्रीलाई मार्नको दु: खपूर्ण गल्ती गरेपछि, मोशाले life० वर्षसम्म आफ्नो ज्यान जोगाएर डराउनुपर्‍यो र उजाडस्थानमा भागे, जहाँ परमेश्‍वर उनलाई जलिरहेको पोथ्राको रूपमा भेट्नुहुन्छ र उनीसँग भेटघाट सुरु गर्नुहुन्छ।
जब योनालाई निनवे शहर मा प्रभु को नाम मा प्रचार गर्न को लागी बोलाइएको थियो, योना विपरीत दिशा मा दौड्यो र भगवान उनको पछि भागे। यदि हामी नयाँ करारमा जान्छौं, के हामी देख्छौं कि येशू बाह्र जना मानिसहरु लाई भेट्नुहुन्छ, उनीहरुलाई पछाडि थप्पड लगाउनुहोस् र भन्नुहोस्: "के तपाइँ मेरो कारण मा सामेल हुन चाहानुहुन्छ"? जब म पत्रुस को बारे मा सोच्दछु कि उसले तीन पटक ख्रीष्ट लाई इन्कार गरेको थियो र एक शिष्य को रूप मा आफ्नो क्यारियर छोडेर माछा मार्ने को लागी फिर्ता भयो - येशू आउनुहुन्छ र समुद्र तट मा उसलाई खोज्नुहुन्छ। उसको असफलता मा पनि भगवान उसको पछि लाग्छन्। तपाइँ पछ्याइरहनुभएको छ, तपाइँ पछ्याइरहनुभएको छ ...
अर्को पदलाई हेरौं (एफिसी १:४-५): “उहाँले संसार सृष्टि गर्नुअघि नै, उहाँले हामीलाई ख्रीष्टका मानिसहरूको रूपमा देख्नुभयो; उहाँमा उहाँले हामीलाई उहाँको सामु पवित्र र निर्दोष खडा हुन चुन्नुभएको छ। उहाँको आँखाको अगाडि उहाँको प्रेमले हामीलाई ...: उहाँले शाब्दिक रूपमा हामीलाई उहाँमा (ख्रीष्ट) चुन्नुभयो। उहाँले हामीलाई उहाँका छोरा र छोरीहरू - येशू ख्रीष्ट मार्फत र उहाँलाई हेर्नको लागि निर्धारण गर्नुभएको छ। त्यो उहाँको इच्छा थियो र उहाँलाई यो मनपर्यो।" मलाई आशा छ कि तपाईंले येशू ख्रीष्टसँगको हाम्रो सम्बन्ध, मुक्ति, हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको हो भनेर बुझ्नुभयो। यो भगवान द्वारा नियन्त्रित छ। यो भगवान द्वारा शुरू गरीएको हो। यो भगवान द्वारा बनाईएको हो। उहाँ हाम्रो पछि लाग्नुहुन्छ।
हाम्रो कथामा फर्कनुहोस्। डेभिडले अब शेट खोज्न मान्छेहरूको एउटा समूह पठाएका छन र उनीहरूले उनलाई लो देबारमा भेट्टाए। त्यहाँ Schet अलग र अज्ञात रहन्छ। ऊ भेट्न चाहँदैन थियो। वास्तवमा, उहाँ भेट्न चाहनुहुन्नथ्यो ताकि ऊ बाँकी जीवन बाँच्न सक। तर ऊ पत्ता लाग्यो, र यी केटाहरूले शेटलाई लगे र उसलाई कारमा लगे र तिनीहरूले उनलाई कारमा हाले र राजधानीमा फिर्ता लगे र दरबारमा लगे। बाइबलले हामीलाई यस रथ सवारीको बारेमा थोरै वा केही पनि बताउँदैन। तर म पक्का छु कि हामी सबैले कारको भुईंमा बस्नु कस्तो हुन्छ कल्पना गर्न सक्छौं। यस यात्रामा शेटले कस्तो महसुस गर्‍यो होला, डर, त्रास, अनिश्चितता। यस्तो महसुस यस पृथ्वीमा आफ्नो जीवनको अन्तिम दिन हुन सक्छ। त्यसपछि उसले योजना बनाउन थाल्छ। उसको योजना यो थियोः जब म राजासामु हाजिर हुन्छु र उसले मलाई हेर्छ, तब उसले महसुस गर्छ कि म ऊसित कुनै खतरा छैन। म उसको सामुन्ने लडें र उनको दयाको निम्ति बिन्ती गर्दछु, र हुनसक्छ उसले मलाई बाँच्न दिनेछ। र यसरी कार महलको अगाडि तानिन्छ। सिपाहीहरूले यसलाई बोक्छन् र कोठाको बीचमा राख्छन्। र ऊ कुनै खुट्टामा लडाईं गर्छ र दाऊद भित्र आउँछन्।
अनुग्रह संग भेट
२ शमूएल:: 2--9,6 मा के हुन्छ याद गर्नुहोस्: “जोनाथन र शाऊलका नाति मरीब-बाल आउँदा उसले दाऊदको सामु घोप्टो परेर दण्डवत्‌ गरे र उनको सम्मान गरे। "त्यसोभए तिमी मेरीब-बाल हौ!" दाऊदले जवाफ दिए, "हो, तिम्रो आज्ञाकारी नोकर!" "हबकूक डराएनन्," डेभिडले भने, "म तिमीलाई तिम्रो बुबा जोनाथनको खातिर अनुग्रह देखाउँछु। म तिमीलाई त्यो भूमि दिनेछु जो तिम्रो पुर्खा शाऊलको थियो। र तपाईं जहिले पनि मेरो टेबलमा खान सक्नुहुन्छ। "" र दाऊदलाई हेरेर उनले जबरजस्ती जनतालाई निम्न प्रश्न सोध्छन्। मेरिब-बालले फेरि भूईँमा झुकाए र भने, म तिम्रो दयाको योग्य छैन। म मरेको कुकुर भन्दा बढि छु! ""
कस्तो प्रश्न! दयाको यो अप्रत्याशित प्रदर्शन ... ऊ बुझ्दछ कि ऊ एक लंगडा हो। उहाँ कोही हुनुहुन्न। उनीसँग दाऊदलाई दिन सक्ने केही छैन। तर यो अनुग्रहको बारेमा हो। चरित्र, परमेश्वरको प्रकृति, अयोग्य मानिसहरूलाई दयालु र राम्रो काम गर्न झुकाव र स्वभाव हो। त्यो, मेरा साथीहरू, अनुग्रह हो। तर ईमानदार हुन गरौं। यो हामीमध्ये अधिकांश बाँचिरहेको संसार होइन। हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौं जसले भन्छ, "मलाई मेरो अधिकार चाहिन्छ।" हामी मानिसहरूलाई उनीहरूको योग्य चीजहरू दिन चाहन्छौं। एकचोटि मैले जूरी सदस्यको रूपमा सेवा गर्नुपरेको थियो, र न्यायाधीशले हामीलाई भने, "निर्णायक सदस्यको रूपमा, तथ्य पत्ता लगाउने र उनीहरूमा कानून लागू गर्ने काम तपाइँको काम हो। अब होइन। तथ्यहरू पत्ता लगाउनुहोस् र कानून तिनीहरूमा लागू गर्नुहोस्।" न्यायाधीशले दयामा खासै चासो राख्दैन थियो र निस्सन्देह दया देखाउँदैनथ्यो। उनी न्याय चाहन्थिन्। र अदालतमा न्यायको आवश्यक छ ताकि सबै कुरा हातबाट नहोस्। तर जब ईश्वरको कुरा आउँदछ मलाई तपाईको बारेमा थाहा छैन। - तर म न्याय चाहान्दिन। मलाई के थाहा छ मलाई थाहा छ। म के हुँ भनेर मलाई थाहा छ। म कृपा चाहन्छु र दया चाहन्छु। डेभिडले स्केटको जीवनलाई बचाएर दया देखाए। धेरै जसो राजाहरूले सिंहासनको सम्भावित उत्तराधिकारीलाई मार्ने थिए। आफ्नो ज्यान जोगाउँदै, दाऊदले कृपा देखाए तर दाऊदले दया भन्दा धेरै परे र उनलाई दयाले भने "म तिमीलाई यहाँ ल्याएको छु किनभने म तिमीलाई दया देखाउन चाहन्छु।" यहाँ तेस्रो जवाफ आउँछ। "ठीक छ, र?"
हामीलाई हामीले सोचे भन्दा बढी माया गरिन्छ
हो, हामी भाँचिएका छौं र हामी पछ्याइरहेका छौं। र त्यो किनभने परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ।
रोमी:: १-२: »अब जब हामी हाम्रा विश्वासका निम्ति परमेश्वरद्वारा स्वीकार्य भएका छौं, हामी परमेश्वरसँग शान्तिमा छौं। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति हामी यो .णी छौं। उनले हाम्रोलागि विश्वासको बाटो खोलिदिए र यसबाट परमेश्वरको अनुग्रहको पहुँच पाए जसमा हामी दृढतापूर्वक स्थापित भएका छौं। ”
र एफिसी १,1,6-7: »मा ... ताकि उहाँको महिमाको प्रशंसा सुन्न सकियोस्: अनुग्रहको प्रशंसा जुन उनले हामीलाई उहाँको प्रिय पुत्र येशू ख्रीष्ट मार्फत देखाए। हामी उसको रगतले मुक्ति पाउँदछौं:
हाम्रो सबै दोष क्षमा भयो। [कृपया मसँग तल ठूलो स्वरले पढ्नुहोस्) त्यसैले भगवान्‌ले हामीलाई उहाँको अनुग्रहको धनी देखाउनुभयो। ” परमेश्वरको अनुग्रह कति महान र धनी छ।
मलाई थाहा छैन तपाईको मनमा के भइरहेको छ। मलाई थाहा छैन तिमी कस्तो प्रकारको कलंक लगाउँछौ। मलाई थाहा छैन कुन लेबल तपाईमा छ मलाई थाहा छैन तपाईं विगतमा कहाँ असफल हुनुभयो। मलाई थाहा छैन तपाईले के भित्र लज्जित पार्नुभयो। तर म तिमीलाई भन्न सक्छु कि अब उप्रान्त तपाईंले तिनीहरूलाई लगाउनु हुँदैन। डिसेम्बर १,, १ 18 मा, १th औं संवैधानिक संशोधन संयुक्त राज्यमा हस्ताक्षर गरियो। यो १th औं परिवर्तनमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको दासत्व सदाको लागि रद्द गरियो। त्यो दिन हाम्रो राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसोभए डिसेम्बर १,, १ 1865।, प्राविधिक रूपमा त्यहाँ कुनै दासहरू थिएनन्। अझै धेरैले दासत्वमा रहेनन् - दुई वर्षको लागि दुई कारणका लागि:
कसै-कसैले यसको बारेमा कहिल्यै सुनेका थिएनन्।
कसै-कसैले आफू स्वतन्त्र छु भनेर विश्वास गर्न इन्कार गरे।
र मलाई शंका छ, आत्मिकरुपमा, कि आज यस कोठामा हामीमध्ये धेरै संख्यामा छौं जो समान अवस्थामा छन्।
मूल्य पहिले नै तिरेको छ। बाटो तयार भइसकेको छ। यसको बारेमा यो हो: कि त तपाईंले यो शब्द सुन्नुभएको छैन वा तपाईंले यो विश्वास गर्न इन्कार गर्नुभयो कि यो सत्य हो कि भनेर।
तर यो सत्य हो। किनकि तपाईंलाई माया गरिएको छ र परमेश्वरले तपाईंलाई पछ्याउनुभएको छ।
केहि क्षण अघि मैले लैलालाई भाउचर दियो। लैला यसको लायक थिएन। उनले यसको लागि काम गरेनन्। उनी उनको योग्य थिएनन्। उनले यसका लागि दर्ता फारम भर्िन। उनी आउँछिन् र यो अप्रत्याशित उपहारको साथ मात्र छक्क परिन्। अरू कसैले भुक्तानी गरेको उपहार। तर अब तिनीहरूको एकमात्र काम - र त्यहाँ कुनै गोप्य चालहरू छैनन् - यसलाई स्वीकार्नु र उपहारको आनन्द लिन सुरु गर्नु हो।
त्यस्तै प्रकारले, भगवानले तपाईंको लागि मूल्य चुकाइसक्नुभएको छ। तपाईले गर्नु पर्ने उपहार भनेको तपाईले प्रदान गर्नु भएको उपहारलाई स्वीकार्नु पर्छ। विश्वासीहरूको रूपमा हामीले दयाको सामना गरेका थियौं। हाम्रो जीवन ख्रीष्टको प्रेमले गर्दा परिवर्तन भयो र हामी येशूमा प्रेममा डुबेका छौं। हामी यो लायक थिएनौं। हामी यसको लायक थिएनौं। तर ख्रीष्टले हाम्रो जीवनको यो अनमोल उपहार प्रदान गर्नुभयो। हाम्रो जीवन अहिले फरक छ।
हाम्रो जीवन भ broken्ग भएको थियो, हामीले गल्तीहरू गरेका छौं। तर राजा हाम्रो पछि लागे किनभने उनले हामीलाई प्रेम गर्छन्। राजा हामीसँग रिसाउनुभएको छैन। Schet को कथा यहीं समाप्त हुन सक्छ, र यो एक महान कथा हुनेछ। तर त्यहाँ अर्को अंश छ - म तपाईलाइ याद गर्न चाहन्न, यो चौथो दृश्य हो।
बोर्डमा एक ठाउँ
अन्तिम भाग २ मा। शमूएल:: reads पढ्छ: "म तिमीलाई त्यो सबै भूमि फिर्ता दिनेछु जुन एक पटक तिम्रो हजुरबुबा शाऊलको थियो। र तपाइँ सधैं मेरो टेबल मा खान सक्नुहुन्छ। " बीस वर्ष पहिले, पाँच वर्षको उमेरमा, त्यही केटाले भयानक त्रासदीको अनुभव गर्यो। उनले आफ्नो सम्पूर्ण परिवार गुमाउने मात्र होइन, पक्षाघात र घाइते भए, विगत १५ देखि २० वर्षदेखि शरणार्थीको रूपमा निर्वासित जीवन बिताए। र अब उसले राजालाई यसो भनेको सुन्छ: "म तिमी यहाँ आउन चाहन्छु।" र चार पदहरू अगाडि, डेभिडले उसलाई भने: "म चाहन्छु कि तपाईंले मेरो छोराहरूमध्ये एकजस्तै मेरो टेबुलमा खाना खाओस्"। मलाई यो पद मन पर्छ। शेट अब परिवारको हिस्सा भइसकेको थियो। डेभिडले भनेनन्, "तिमीलाई थाहा छ, शेट। म तपाईंलाई दरबारमा पहुँच दिन चाहन्छु र तपाईंलाई समय-समयमा भ्रमण गर्न दिन चाहन्छु।" वा: "यदि हामीसँग राष्ट्रिय बिदा छ भने, म तिमीलाई शाही परिवार संग शाही बक्स मा बस्न दिन्छु"। हैन, उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? "स्केट, हामी तपाइँको लागि ब्ल्याकबोर्डमा हरेक साँझ एक ठाउँ आरक्षित गर्नेछौं किनभने तपाइँ अब मेरो परिवारको हिस्सा हुनुहुन्छ।" कथाको अन्तिम पदले यसो भन्छ: “उनी यरूशलेममा बस्थे किनभने उहाँ राजाको टेबुलमा निरन्तर पाहुना हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई दुवै खुट्टामा पक्षाघात भएको थियो।" (२. शमूएल 9,13)। मलाई कथाको अन्त्य गर्ने तरिका मनपर्छ किनभने लेखकले कथाको अन्त्यमा सानो पोस्टस्क्रिप्ट राखेको जस्तो देखिन्छ। शेटले यो अनुग्रह कसरी अनुभव गरे र अब राजासँगै बस्ने र राजाको टेबुलमा खाना खाने अनुमति छ भन्ने बारे हामी कुरा गरिरहेका छौं। तर उहाँले जित्नुपर्ने कुरा हामीले बिर्सेको उहाँ चाहनुहुन्न। र उस्तै हाम्रो लागी जान्छ। यसले हामीलाई के खर्च गर्यो, हामीलाई तत्काल आवश्यकता थियो र एउटा अनुग्रह भेट भयो। धेरै वर्ष पहिले, चक स्विन्डोलले यस कथाको बारेमा स्पष्ट रूपमा लेखेका थिए। म तिमीलाई एउटा अनुच्छेद पढ्न चाहन्छु। उनले भने, "निम्न दृश्य वर्ष पछि कल्पना गर्नुहोस्। राजाको दरबारको ढोकाको घण्टी बज्छ र डेभिड मुख्य टेबलमा आएर बस्छन्। केही बेर पछि, अम्नोन, धूर्त, चालाक अम्नोन, दाऊदको देब्रेपट्टि बसे। त्यसपछि तामार, एउटी सुन्दर र मिलनसार युवती देखा पर्‍यो र अमनोनको छेउमा बस्छिन्। अर्कोतर्फ, सोलोमन बिस्तारै आफ्नो अध्ययनबाट बाहिर आउँदैछन् - अपूर्व, प्रतिभाशाली, सोचमा हराएको सोलोमन। बगिरहेको, सुन्दर, काँध-लम्बाइको कपाल भएको अब्सालोम सिटमा बस्छ। त्यो साँझ, योआब, बहादुर योद्धा र सेना कमाण्डर, रात्रिभोजको निम्तो दिइएको थियो। जे होस्, एक सीट अझै खाली छ र त्यसैले सबै जना पर्खिरहेका छन्। तपाईंले खुट्टा फेर्दै र लयबद्ध हम्प, हम्प, बैसाखीको हम्प सुन्नुहुन्छ। यो Schet बिस्तारै टेबलमा आफ्नो बाटो बनाइरहेको छ। ऊ आफ्नो सिटमा चिप्लन्छ, टेबलको कपडाले उसको खुट्टा छोप्छ।" शेटले अनुग्रह के हो बुझे जस्तो लाग्छ? तपाईलाई थाहा छ, यसले भविष्यको दृश्यलाई वर्णन गर्दछ जब भगवानको सम्पूर्ण परिवार स्वर्गमा ठूलो भोज तालिकाको वरिपरि भेला हुनेछ। र त्यस दिन परमेश्वरको अनुग्रहको टेबुलक्लोथले हाम्रा आवश्यकताहरू ढाक्छ, हाम्रा खाली आत्माहरूलाई ढाक्छ। तपाईंले देख्नुभयो, हामी परिवारमा आउने तरिका अनुग्रहद्वारा हो, र हामी यसलाई अनुग्रहद्वारा परिवारमा जारी राख्छौं।
हाम्रो अर्को पद कलस्सी २: in मा छ: “तपाईंले येशू ख्रीष्टलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार्नुभयो; यसकारण अब उनको साथमा र उसको तरिका अनुसार समुदायमा बस्नुहोस्! " तपाईंले अनुग्रहद्वारा ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो। अब जब तपाईं परिवारमा हुनुहुन्छ, तपाईं यसलाई अनुग्रहद्वारा हुनुहुन्छ। हामीमध्ये कोही-कोही सोच्छौं कि अनुग्रहले हामी इसाईहरू हुने बित्तिकै हामीले अझ विशेष रूपमा कडा परिश्रम गर्नुपर्दछ र परमेश्वरले हामीलाई चाहानुहुन्छ र प्रेम गरिरहनुहुन्छ भन्ने कुरामा सबै कुरा ठीक छ कि छैन भनेर पक्का गर्नुपर्दछ। हो, सत्यबाट अरु के हुन सक्दैन। बुबाको रूपमा, मेरा बच्चाहरूप्रतिको मेरो प्रेम कुन किसिमको काम वा उनीहरू कति सफल छन् वा उनीहरू सबै ठीक काम गर्छन् वा गर्दैनन् त्यसमा निर्भर हुँदैन। मेरो सम्पूर्ण प्रेम तिनीहरूमा छ, केवल किनकि तिनीहरू मेरा बच्चाहरू हुन्। र उही तपाइँको लागि जान्छ। तपाईं परमेश्वरको प्रेमको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ किनकि तपाईं मात्र उनका सन्तान हुनुहुन्छ। मलाई अन्तिम हुन दिनुहोस् "त्यसो भए के?" उत्तर
हामी सोचे भन्दा बढी सुअवसर पाएका छौं
भगवानले हाम्रो जीवनलाई मात्र बचाएन, तर उहाँले हामीलाई उहाँको अनुग्रहको जीवनको साथ देखाउनुभयो। रोमी from का यी शब्दहरू सुन्नुहोस्, पावल भन्छन्:
'यी सबैमा के भन्न बाँकी छ? परमेश्‍वर आफै हाम्रो लागि हुनुहुन्छ [र उहाँ हुनुहुन्छ], तब हाम्रो विरुद्धमा खडा हुन को चाहन्छ? उसले आफ्नै छोरालाई छोडेन, तर उसलाई हामी सबैको लागि मृत्युदण्ड दियो। तर यदि उहाँले हामीलाई छोरा दिनुभएको छ भने, के उहाँले हामीबाट केही पनि रोक्नुहुनेछ?” (रोमी ८:३१-३२)।
उसले ख्रीष्टलाई मात्र होइन तर हामी उहाँको परिवारमा पस्न सकौं, तर अहिले उसले तपाईंलाई परिवारमा एक पटक अनुग्रहको जीवन बिताउन चाहिने सबै कुरा दिन्छ।
तर म यो वाक्यांश मन पराउँछु: "ईश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ।" मलाई पुन: दोहोर्याउन दिनुहोस्: "भगवान तपाईका लागि हुनुहुन्छ।" फेरी, यसमा कुनै श doubt्का छैन कि आज हामीमध्ये कोही जो यहाँ छौं वास्तवमा यसलाई विश्वास गर्दैनन्, यो कहिले पनि भएको थिएन कि कोही पनि स्टेडियमको हाम्रो प्रशंसक घुमाउरो मा हामीलाई उत्साहित गर्नेछन्।
म हाई स्कूलमा बास्केटबल खेल्थें। हामीसँग खेल्दा हामीसँग प्रायः दर्शकहरू हुँदैनन्। जे होस्, एक दिन जिम भरिएको थियो। मैले पछि थाहा पाएँ कि उनीहरूले त्यो दिन एक फन्डराइसर योजना गरेका थिए कि एक डलरको एक चौथाईको लागि वर्ग निकास किन्नेछ। त्यो भन्दा पहिले, तपाईं बेसबल खेल आउन पर्छ। तेस्रो वाक्यको अन्त्यमा, त्यहाँ ठूलो हल्ला भयो, स्कूल हटाइयो, र जिम भर्ने बित्तिकै खाली भयो। तर त्यहाँ, दर्शकहरूका बीचमा, दुई व्यक्ति बस्यो जो खेलको अन्त्यसम्म त्यहाँ बसेका थिए। यो मेरो आमा र मेरो हजुरआमा थियो। तिमीलाई थाहा छ? तिनीहरू मेरो लागि थिए, र मलाई थाहा थिएन कि उनीहरू त्यहाँ छन्।
कहिलेकाँही यसले लामो समय लिन्छ सबैले सोचे पछि - जब सम्म तपाईंले यो महसुस गर्नुहुन्न कि परमेश्वर तपाईंको पक्षमा हुनुहुन्छ। हो, वास्तवमा, र उसले तपाईंलाई हेरिरहेको छ।
Schet कथा सिर्फ महान छ, तर म जानु अघि अर्को प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु, यो छ: राम्रो छ र?
आउनुहोस्, हामी १ कोरिन्थी १ begin:१० बाट सुरु गरौं: "तर परमेश्वरको अनुग्रहले म त्यस्तै भएको छु, र उनको दयालु हस्तक्षेप व्यर्थ गएन।" यो खण्डले यसो भन्ने देखिन्छ, "यदि तपाइँसँग अनुग्रहको सामना भयो भने परिवर्तनले फरक पार्दछ।" जब म एक बच्चा थिएँ र बढ्दै थिएँ, म स्कूलमा राम्रो थिएँ र प्राय: जसो मैले प्रयास गरेका चीजहरू सफल भए। त्यसपछि म कलेज र माध्यमिकमा गएँ र २२ वर्षको उमेरमा पास्टरको रूपमा पहिलो काम पाएँ। मलाई केहि थाहा थिएन, तर मैले सोचे कि मलाई सबै कुरा थाँहा छ। म सेमिनरीमा थिएँ र हरेक साताको अन्त्यमा मध्य अर्कान्सासमा रहेको ग्रामीण शहरतिर उडान गर्थे। यो भन्दा विदेशमा जान संस्कृतिको झण्डा कम हुने थियो। मध्य अर्कानससको पश्चिम।
यो भिन्न संसार हो र त्यहाँका मानिसहरू राम्री थिए। हामीले उनीहरूलाई माया गर्‍यौं र तिनीहरूले हामीलाई प्रेम गरे। तर म त्यहाँ एउटा चर्च निर्माण गर्ने र एक प्रभावी पादरी बन्ने लक्ष्य लिएर त्यहाँ गएको थिएँ। म पाठशालामा पढेको सबै कुरा व्यवहारमा राख्न चाहन्थें। तर, इमानदारीताका साथ, त्यहाँ लगभग दुई र आधा वर्ष को लागी पछि, म गरें। मलाई अब के गर्ने थाहा भएन।
चर्च बिरलै बढेको छ। मलाई ईश्वरले सोध्नु भएको सम्झना छ: कृपया मलाई अरु कतै पठाउनुहोस्। म यहाँबाट टाढा जान चाहन्छु। र मलाई याद छ मेरो अफिसको डेस्कमा एक्लै बसिरहेको थियो र सम्पूर्ण चर्चमा कोही पनि थिएन। सम्पूर्ण स्टाफ म मात्रै थियो र म रुनु थालेँ र धेरै चिन्तित भएँ र असफलता महसुस गरे र बिर्सिएको महसुस भयो र कसैले पनि सुन्न नसकेको भावनाको साथ प्रार्थना गरे।
जे भए पनि २० बर्ष भन्दा बढी बर्ष पछि पनि मलाई यो अझै राम्ररी याद छ। यद्यपि यो दर्दनाक अनुभव थियो, यो धेरै उपयोगी थियो किनकि परमेश्वरले मेरो जीवनमा यसलाई मेरो विश्वास र गर्व तोड्न प्रयोग गर्नुभयो र मलाई यो बुझ्न मदत गर्नुभयो कि उहाँ मेरो जीवनमा जे गर्न चाहानुहुन्छ। , सबै कुरा उहाँको अनुग्रहको कारणले भयो - र किनभने म राम्रो होइन वा म प्रतिभाशाली भएको कारण वा म दक्ष भएकोले होइन। र जब म विगत केहि वर्षहरूमा मेरो यात्राको बारेमा सोच्छु र जब मैले यो जस्तो जागिर पाउन सक्दछु भनेर देख्छु [र म यहाँ के गर्दैछु भनेर कमसेकम योग्य छु], म प्रायः अपुग महसुस गर्छु। मलाई एउटा कुरा थाहा छ, म जहाँसुकै भए पनि, परमेश्वर मेरो जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ, ममा वा मद्वारा, सबै कुरा उहाँको अनुग्रहमा हुन्छ।
र एकचोटि तपाईंले बुझ्नुभए पछि, जब यो वास्तवमा डूब्छ, तपाईं उही हुन सक्नुहुन्न।
मैले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न भनेको यो हो, "के हामीले प्रभुलाई चिनेका हामीहरू अनुग्रह झल्काउने जीवन जिउँछौं?" केहि लक्षणहरू के के हुन् जसले स indicate्केत गर्दछ कि "म अनुग्रहको जीवन बिताउँछु?"
आउनुहोस्, हामी तलको पदको अन्तमा छलफल गरौं। पावल भन्छन्:
"तर मेरो जिन्दगीले के अर्थ राख्छ? यो मात्र महत्वपूर्ण छ कि म त्यो कमिशन पूरा गर्छु कि प्रभु, येशूले मलाई अन्त्यमा [कुन एक?] लाई सुम्पनुभयो: सुसमाचार घोषणा गर्न [उहाँको अनुग्रहको सन्देश] कि भगवानले मानिसहरुमा दया गर्नुभएको छ "(प्रेरित २०: २४)। पावल भन्छन्: यो मेरो जीवनको मिशन हो।
शेचेट जस्तै तपाई र म आध्यात्मिक तवरले टुटेका छौं, आध्यात्मिक तवरमा मरेका छौं। तर शेथ जस्तै हामी पनि पछि लाग्यौं किनकि ब्रह्माण्डका राजाले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र हामी उहाँको परिवारमा भएको चाहन्छौं। उहाँ हामीसँग दयाको सामना गरेको चाहनुहुन्छ। हुनसक्छ त्यसैले आज बिहान तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ र किन पक्का हुनुहुन्न तपाईं यहाँ किन आउनुभयो। तर भित्र तपाईले याद गर्‍यौं कि झटका वा तपाईंको मुटुमा पुलियो। यो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जसले तपाईंलाई बोल्नुहुन्छ: "म तपाईंलाई मेरो परिवारमा चाहन्छु।" र यदि तपाईंले ख्रीष्टसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध सुरु गर्न कदम चाल्नु भएको छैन भने हामी तपाईंलाई यो बिहान यो अवसर प्रदान गर्न चाहन्छौं। केवल निम्न भन्नुहोस्: "म यहाँ छु। मसँग प्रस्ताव गर्ने केही छैन म सिद्ध छैन। यदि तपाईंले मेरो जीवन यति टाढा जान्नुहुन्थ्यो भने तपाईं मलाई मनपर्नुहुने थिएन।" तर भगवान तपाईंलाई जवाफ दिनुहुन्छ: "तर म तपाईंलाई मन पराउँछु। र तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको मेरो उपहार स्वीकार्नु हो"। त्यसैले म तपाईंलाई एक क्षणको लागि झुक्न भन्छु र, यदि तपाईंले यो कदम लिनु भएको छैन भने, म तपाईंलाई केवल मसँग प्रार्थना गर्न भन्दछु। म एउटा वाक्य भन्छु, तपाईले यसलाई मात्र दोहोर्याउनु पर्छ, तर प्रभुलाई भन्नुहोस्।
"प्रिय येशू, शेट जस्तै, म जान्दछु म भाँचेको छु र मलाई थाहा छ कि मलाई तपाईलाई चाहिन्छ, र म यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्दिन, तर म विश्वास गर्दछु कि तपाईं मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र मलाई पछ्याउनुहुन्छ र तपाईं, येशू, क्रूसमा मर्नुभयो र मेरो पापको मूल्य पहिले नै तिरेको छ। र यसैले अब म तपाईंलाई मेरो जीवनमा आउन भन्दछु। म तपाईंको अनुग्रह जान्न र अनुभव गर्न चाहन्छु ताकि म अनुग्रहको जीवन बिताउन सक्दछु र तपाईंसँग सँधै रहन्छु।
लान्स विट द्वारा